I-Delta 8 THC Ihoseyili, i-CBD kunye ne-CBG Oyile kunye ne-CBD Roll On
Yenza ubomi bakho bube lula EBANDLENI CBD
I-DELTA 8 THC YONKE
I-CBD YONKE Cofa Apha ukuze uodole i-CBD Tincture, Roll On okanye Tranqul Cream SHOP MANJE Cofa apha ukuze uqhagamshelane nommeli wehoseyile Yenza ubomi bakho bube lula EBANDLENI CBD Thenga ezi zinto zintle ngaphambi kokuba zihambe! SHOP MANJE
I-CBD, i-CBG kunye ne-Delta ye-8 ye-THC yeeMveliso zeWholesale
Unokuba ngumthengisi kwaye ujoyine i IDelta 8 iTHC Ivenkile inguquko. Unganika abathengi bakho isiqabu esinamandla ngokuthengisa okona kulungileyo IDelta 8 iTHC Ivenkile iimveliso. Trytranquil.net's Delta 8 iimveliso, ezithathwe kwi-hemp kunye nendalo yonke, zenziwe ngabasebenzi bezoshishino. Fumana ulwazi oluthe kratya malunga neentengiso zethu zehoseyile ngezantsi, kwaye emva koko ugcwalise ifomu ukuqalisa uhambo lwakho nge-Trytranquil!
Ngaba unomdla kwi-Delta 8 THC kwi-wholesale? Kulungile! Ishishini lesizwe le-cannabis linamava ukukhula okumangalisayo. Imakethi iphindaphindeke kabini kule minyaka mithathu idlulileyo njengoko i-cannabis iye yasuka ekubeni yinto evaliweyo yaya ekubeni yimveliso ebalulekileyo ephucula ubomi babantu. Ukunyuka kwe-Delta 8 THC kwi-wholesale (i-derivative ye-hemp yendalo) iyaqhubeka. Oku kutsale abathengi kunye neengcali zeshishini kwilizwe liphela.
IDelta 8 THC, eyaziwa ngokuba yi-CBD okanye i-THC eqhelekileyo, luhlobo lwe-cannabinoid. I-Cannabinoid ibhekisa kwikhompawundi yendalo efumaneka kwizityalo ze-cannabis ezisebenzisana nomzimba. I-Delta 8 THC iWholeliseli iyafana ne-CBD kunye ne-THC kwaye ibonelela ngeziphumo zokulinganisa kunye nokuthomalalisa umzimba wakho.
UMthetho osaYilwayo weFama ka-2018 wenza kube semthethweni ukukhula, ukuthengisa, kunye nokuthenga i-hemp-derived cannabinoids njenge-CBD kunye ne-Delta 8. Iholeyili yeyona ndlela ilungileyo yokwenza imali kwiDelta 8 yentengiso. Kulula ukuba ngumthengisi weDelta 8 THC. Kubalulekile ukufumana umgangatho ophezulu weemveliso zeDelta 8 zeTHC kubathengi bakho abaya kuqhubeka nokuzithenga. Fumana indlela yokuqalisa ngoku.
Ihoyile Delta 8 THC
Uba njani umthengisi weDelta 8 THC?
Ziindaba ezimnandi ezi! Awudingi ukuba nelayisensi ekhethekileyo ukuze uthengise iDelta 8, njengoko i-hemp isemthethweni ngokusemthethweni. Ukuze ukwazi ukuthengisa iimveliso, uya kufuna ilayisensi yomthengisi esebenzayo.
Nangona sikhankanye ukuba i-hemp isemthethweni, kuthekani nge-D8? Delta 8 THC isemthethweni federal, kodwa hayi Delta 9 THC ukuba ngaphezu 0.3 ekhulwini THC. D8 THC, eyona nxalenye iphambili yentsangu, isemthethweni ngokusemthethweni. Oko kuthetha ukuba ufuna esi siqinisekiso kuphela ukuze uthengise iDelta 8 THC. UGuillermo Bravo yindoda yethu ephezulu kwiinkonzo
Ngowuphi umahluko osemthethweni phakathi kwe-D8 THC kunye ne-D9? I-Delta 8 THC, ekhutshwe kwi-hemp, yinyani ebalulekileyo. Inqanaba lokuxilisa ngomnye umba obalulekileyo. I-Delta 9 THC ibangela ukuphakama okukhulu ngakumbi kuneDelta 8 THC. I-D8 ineempembelelo ezinamandla kune-CBD kodwa ayivelisi buzz efana ne-D9 THC.
Kuya kufuneka usoloko ujonga urhulumente wakho ukuze uqiniseke ukuba unolwazi lwangoku kwimigaqo elawula ukuthuthwa kweemveliso ze-Delta 8 THC. Ilizwe ngalinye linemithetho yalo xa kufikwa ekuthengiseni okanye ekuthengeni iDelta 8 THC.
Sicebisa ukuba abarhwebi ababhalisiweyo abaneelayisenisi zomthengisi babe nesiseko esikhulu sabathengi phambi kokuba baqalise ukuthengisa ihoseyile. Isiseko esikhulu somthengi siya kuqinisekisa ukuba wenza inzuzo entle kwaye unikezele ngembuyekezo efanelekileyo kutyalo-mali.
Sifuna ukukwazi ukuthengisa iimveliso zethu kubantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka! Sicebisa ukuba nabani na ongena kwihoseyile kufuneka azazi ngokupheleleyo iingozi ezibandakanyekayo kwaye avuleleke ekufundeni kuzo.
Trytranquil.net: Kutheni iDelta 8 yeTHC yeeMveliso zeWholesale?
I-Trytranquil.net yinkokeli kwimarike yeDelta 8 THC. Iinkokeli zenkampani yethu zenziwe ngoovulindlela kwi-cannabis, ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yamava adibeneyo kumashishini okutya kunye ne-cannabis. Sikholelwa ngamandla kwiimveliso zempilo kwaye sizabalazela ukunika amava akhuthazayo kubo bonke abathengi bethu. Sizimisele ukulandela ezi zikhokelo:
Izithako ezisempilweni, eziphilayo: Sikhetha zonke izithako, sizikhethela izibonelelo zempilo kunye nokuphila kakuhle. Iimveliso zethu zenziwe nge-organic, vegan, kunye nezithako ezingezizo ze-GMO, eziphucula amava e-D8.
IiNdlela zokuKhula eziGqwesileyo: Iintyatyambo ze-Hemp zikhuliswe ngokowona mandla azo zombini ngaphakathi nangaphandle kuseto. Oku kwandisa isivuno sethu seDelta 8. Zonke iimveliso zethu ze-Delta 8 zenziwe nge-hemp ekumgangatho ophezulu.
IHemp yase-US-eKhulisiweyo Senze intsebenziswano kunye neefama ze-Colorado hemp ukuqinisekisa ukuba i-Delta 8 THC yethu ikhutshwe kwi-hemp yase-US. Le hemp ihlangabezana nayo yonke imigangatho yokhuseleko.
Isatifikethi soHlahlelo: Zonke iimveliso ze-D8 ziza neSatifikethi sokuHlalutya. Oku kuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zikhuselekile kwaye zichanekile.
Uphononongo lwabathengi: Exhale Wellness ngokuzingca ubonisa uphononongo lwabathengi. Siyawakhathalela amava abathengi bethu kwaye sifuna ukwabelana ngengxelo yokwenyani nabanye abafuna imveliso elungileyo.
Uxhaso lwabathengi: Sineqela elizinikeleyo labameli benkonzo yabathengi abanceda abathengi bethu bafumane imveliso egqibeleleyo kwaye bancede abathengisi abajonge ukuthenga iimveliso zeDelta 8 THC.
lwemibandela Ezi nkcazo azizange zivavanywe yi-FDA. Abantu abangaphantsi kweminyaka engama-21 ubudala akufuneki batye iDelta 8THC. Zamatranquil.net iimveliso azenzelwanga ukuxilonga, ukunyanga, ukunyanga okanye ukuthintela nasiphi na isifo.
Delta 8 Ihowuliseyili Izithako
I-Wholesale Delta 8 THC yindlela entle yokuqinisekisa ukuba abathengi bakho bafumana iimveliso ezikhuselekileyo nezikumgangatho ophezulu. I-TryTranquil.net yeemveliso ze-Delta ezisi-8 ze-CBD ziqulethe izithako eziphilileyo.
Akukho mibala eyenziweyo okanye incasa
Nanku umzekelo.Trytranquil.net Ubuninzi Delta 8 iTHC yeoyile iqulethe kuphela Delta 8 THC, kunye neoli hempseed. Ioli yeHempseed yakhethwa ngabom kuba i-D8 inokwetyiswa i-fat-soluble. Oku kwenza ukuba kube lula kwiWholeliseli i-D8 ukuba ifunxe ngokukhawuleza kwaye ngamandla ngakumbi.
Ioli yeHempseed ineenzuzo ezininzi zempilo. Ioyile yeHempseed ineenzuzo ezininzi zempilo, kubandakanya:
Ioli yeHempseed iphucula iimeko zolusu kwaye inokunciphisa amabala.
Uxinzelelo lwegazi olusezantsi. I-Omega-3 fatty acids inokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi.
Ukukhuthaza impilo yentliziyo: Ioli ye-Hempseed, etyebileyo kwi-linoleic acids, iyaziwa ngokunciphisa i-cholesterol.
Ioli yeHempseed inokunceda ukunciphisa intlungu kunye nokudumba.
Sithumela ngenqanawa eJamani, eRashiya, eGrisi, eMexico, eItali, eHungary, eRomania nakwamanye amazwe amaninzi.
Cofa Apha ukuze uqhagamshelane nommeli weentengiso
Jonga Kutheni Izigidi
UTHANDO NOKUTHEMBEKA KWE-CBD
EYONA BEST CBD OIL & DELTA 8 THC IMVELISO